Etiopia: Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena Afrika 2012 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2012 8:07 GMT
Mpitondra maherin'ny 700 avy aminà firenena maherin'ny 70 no nanatrika ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena natao tao Addis Abeba, Etiopia nanomboka ny 9 hatramin'ny 11 May 2012.
Fikarakarana avy amin'ny sehatra tsy mainkina ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena, miasa ho fampivoarana ny endrik'izao tontolo izao amin'ny fampandraisana anjara ny mpitantana fandraharahàna, ny ara-politika, fampianarana ambony ary mpitarika hafa eo amin'ny fiarahamonina mba handrafitra fandaharan'asa eran-tany, isam-paritra ary ara-indostria:
Miaina firoboroboana mihazakazaka izao i Afrika ary na eo aza ny fiovaovàna ara-toekarena tsy mitsahatra manerana ny tany, ireo mpitondra Afrikana dia manjohy ireo fepetra izay hanova ny faritra ho lasa ivon'ny firoboroboana eran-tany amin'ny hoavy. Ho amin'izany, ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena momba an'i Afrika dia hiezaka haka ny tsara tamin'izay fivoarana ara-politika, toekarena sy sosialy nahomby tato anatin'ny taona vitsy amin'ny fanolorana sehatra marosampana hampivelarana hevitra vaovao sy hetsika ho enti-manatratra firoboroboana iaraha-mitantana sy maharitra kokoa, – hoy i Elsie S. Kanza, Tale Miandraikitra an'i Afrika, Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena.
Caroline Kende-Robb, Kofi Annan sy Bob Geldof – Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena momba an'i Afrika 2012. Loharanon-tsary: Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena (CC BY-SA 2.0) .
Tsy mahagaga raha atao aty Afrika ny vovonana tahaka izany satria ireo firenena Afrikana dia tafiditra ho anatin'ireo toekarena malaky firoborobo indrindra maneran-tany. Ny firenena folo sangany amin'ny fihazakazaky ny fitobmoan'ny mponiny koa dia mbola ao Afrika. Saingy ny nifidianana an'i Adis Abeba dia mitoetra ho fanontaniana maro tsy misy valiny ho an'ireo mafàna fo mpiaro ny zon'olombelona.
Manontany ilay Etiopiana bilaogera sady mpanoratra ho an'ny Global Voices , “Nony sambany mampiantrano ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena faha-22 eto amin'ny tanin'i Afrika i Addis Ababa, misy miraharaha ve?”:
Tena inoako mafy mihitsy fa ny lohahevitra iray tokony ho resahana anatin'ireo fifanakalozan-dresaka marobe ao amin'ilay vovonana dia ny anjara toeran'ny media malalaka sy tsy miankina sy ny firoboroboana ara-toekarena aty Afrika. Lohahevitra hafa ihany koa tokony ho hita ao anaty fandaharam-potoana ireo olana tahaka ny famonjàna mpanao gazety, ny faneriterena ataon'ny governemanta amin'ireo orinasa mpikirakira fifandraisana ary angamba ny kolikoly. Ny marina dia mandrebireby ny saina tsy hibanjina ny tena fanamby goavana isanandro vaky atrehan'ireo media tsy miankina ny fitodihan'ny masoben'ireo mpampita vaovao amin'izao fotoana amin'ny fandavahana ara-toekaren'i Etiopia, .
Ny Alarobia no nanomboka ilay fihaonambe, taorian'ny vaovao ratsy marobe tao Etiopia momba ny fampidirana am-ponjoa 10 taona, na mihoatra mihitsy aza natao an'ireo mpanao gazety dimy avy amin'ny tsy miankina —Woubshet Taye, Elias Kifle, Re’eyot Alemu sy teratany roa avy any Soeda — ary ilay nahazo ny loka 2012 PEN America press freedom, natokana ho an'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety, Eskinder Nega, dia mety hiatrika fanamelohana ho faty raha toa ka voaheloka ny Zoma teo.
Na izany aza, Bekele milaza fa ny fitondrana ny WEF (fanafohezana ny anaran'ilay fihaonambe) ho ao Etiopia “dia tena mariky ny fiovan'ny fomba fahitàna an'i Etiopia tanteraka mihitsy”
Nt fitondrana ilai Fihaonambe ho aty Etiopia dia tena mariky ny fiovan'ny fomba fahitàn'ny fivondronambe iraisam-pirenena an'i Etiopia tanteraka mihitsy – fahatakarana miandalana fa manana otrikarena ity kaontinanta ity fa tsy hoe fotsiny toeran'ny loza sy ny olana tsy ahitam-bahaolana.
Amin'ny maha-solontenan'ny fiarahamonina sivily ao anatin'izay ho fiaraha-mientana goavan'ireo mpanao politika sy mpandraharaha manana ny toerany, hamafisiko ny fivoarana araka ny tokony ho izy miainga avy amin'ny fananagànana ireo vondrom-piarahamonina mitodika mankany amin'ny toekarena matanjaka, sy, amin'ny farany, fahamarinan-toerana ara-politika lehibe kokoa.
Ao amin'ny Twitter, mampiasa ny tenifototra #WEFAfrica ireo mpandefa bitsika mba hifampizaràna ny vaovao sy ny lesona azo avy tamin'ilay Fihaonambe:
@Kwabena: Iza (eto) no mampiasa ny teknolojia vaovao mba hampandraisana anjara ny tanora? – hoy i Klaus Schwab nanontany tao amin'ilayFihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena momba an'i Afrika #wef #WEFAfrica
@waresafrica: “Tsy hanao fampiasam-bola any an-toeran-kafa ankoatra an'i Afrika amin'izao fotoana aho satria eto izao no misy firoboroboana.”hoy i Dangote mitantara ny #WEFAfrica ao Addis
@msibeko: Fotoana tsara indrindra ho an'i Afrika tao anatin'ny 50 taona, saingy aza fangaro ny firoboroboana ara-toekarena sy ny fiofoana ara-toekarena. Kaberuka #WEFAfrica
@StephanMorais: Ny fomba fijeriko dia tsy misy ifandraisan'izay demaokrasia sy ny firoboroboana ara-toekarena mihitsy, nefa ny demokrasia mahavita ny tenany, PM Ethiopia @ #WEFAfrica #YGL
@Africa_activist: Mba midona any amin'ny Afrikana tsotra any io fomba fisaina miabon'i Afrika io #AfricaOptimism, hetsiky ny matsilo saina ve ity, ahoana no hampivaingana&haha-mpitondra fanavaozana azy? #WEFAfrica #YGL
@FightPoverty: Andro nahaliana ny 10 May @GrowAfricaForum – hafatra fototra: akisaho hiala amin'ny fampiroboroboana ny fambolena ny saina ka ho amin'ny fampiroborobona ny fambolena mitodika amin'ny tsena
Azo narahana tato ilay Fihaonambe .